Maxaa keenay in Booliska magaalada London ay baaritaan ku sameeyaan Guriga qoys Soomaaliyeed? – Bandhiga
Maxaa keenay in Booliska magaalada London ay baaritaan ku sameeyaan Guriga qoys Soomaaliyeed?
Saraakiil ka tirsan Booliska La-dagaalanka Argagixisdda ee London ayaa baaritaan ku sameeyay guri ay deggan yihiin Qoys Soomaali ah oo ku yaalla magaalladda Manchester ee dalka Britian.
Sida uu qoray Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalladad London waxa ay booliska wareysteen dadka deriska la ah qoyska Soomaaliyeed waxaana ay u sheegeen Booliska in Qoyskaasi leeyihiin 4 ilaa 5 carruur ah, kuwaasi oo ku-dhawaad 12-sanno degganaa dalka Britain, iyagoo horey uga soo guuray dalka Holland.
NOUSHA BABAAKACHEL oo deris la ah Guriga ay Ciiddanka baareen ayaa u sheegtay Wargeyska Daily Mail inay Qoyska Soomaalida la nool yihiin gabar iyo 2 Wiil oo ay dhaleen, mid uu dhigto Jaamacadda, halka midka kalena uu ka shaqeeyo Garoonka Diyaaradaha ee Manchester.
Waxay intaasi ku dartay in Wilka ugu yaraa qoyskaasi uu dib ugu laabtay Somalia.
Boliska Manchester weli ma aysan shaacinin sababaha loo beegsaday Qoyskaasi, balse waxa uu hawlgalkaasi ku soo beegmay, iyadoo ay Boliska Manchester sheegeen inay gacanta ku dhigeen qabteen Nin 25-jir ah, kaasi oo 3 qof dhaawacay habeenkii loo dabaal degayey sannadka cusub ee tirsiga Miilaadiyadda ee 2019-ka.
Dhageyso: Warka Duhur Idaacada Bandhiga